'सी एन एस इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट ग्रुप आफैँमा बहुआयामिक छ ! तिन बर्षभित्र मल्टिनेशनल कम्पनी बनाउछौँ' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘सी एन एस इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट ग्रुप आफैँमा बहुआयामिक छ ! तिन बर्षभित्र मल्टिनेशनल कम्पनी बनाउछौँ’
Posted by Headline Nepal | २७ मंसिर २०७३, सोमबार १५:०६ |
सिएनएस इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप प्राईभेट लिमिटेडले शुक्रबार आफ्नो ओपनिङ गरेको छ । देशमा जलविद्युत आयोजना,सरकारी आयोजना,हस्पिटालिटी,आयात,निर्यात,शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उदेश्यका साथ खोलिएको यो ग्रुपले सुरुमै विभिन्न जिल्लाहरुमा आफ्नो कार्य शुभारम्भ गरिसकेको छ । शुक्रबार कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडाले उद्धघाटन गरेर ग्रुपको सार्वजनिक गरिएको हो । सो अवसरमा हामीले ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र कार्की र कार्यकारी निर्देशक सुनिल पुरीसंग संयूक्त कुराकानी गरेका थियौँ ।
सी एन एस इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट ग्रुपको को उदेश्य के हो ?
– हाम्रो यस्तो कम्पनि हो जसले यस्तो उदेश्य बोकेको छ ,जो मान्छेसंग पैसा छ,कोही मान्छे एउटा व्यवसाय गरिरहेको छ,मानौ कसैले निर्यात वा आयात गरेको छ । उ संग हस्पिटालिटीको ज्ञान नहुन सक्छ, उसंग शैक्षिक क्षेत्र,स्वास्थ्य क्षेत्रको नहुन सक्छ त्यस्तै हाइड्रोको नहुन सक्छ । यस्तो प्रोजेक्टहरुको आइडिया नहुन सक्छ यी कुराहरु नेपालमा अहिले एकदमै फस्टाइरहेको छ । त्यसमा हामीले विदेशी टिमहरुसंग सल्लाह गरेर सर्भे गरेका थियौँ । जस्तो जर्मन, बेलायती लगानीकर्ताहरुसंग त्यस्तै दुताबाससंग पनि सुझव लिएर के मा लगानी गर्यो भने बढि भन्दा बढी नाफा हुन्छ ? के मा लगानी गर्यो भने सुरक्षित लगानी हुनसक्छ ? भन्दा हामीले पाँच छ वटा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौ । अहिले हामीले लगानी गरेको क्षेत्रमा रेष्टुरेण्ट हस्पीटालिटी छ,अव छिट्टै एउटा रिसोर्टपनि खोल्दै छौ । अर्को भनेको सरकारी प्रोजेक्टमा पनि हामी लगानी गर्ने तयारीमा छौ जसको लागि मेरो एउटा टिम छ जर्मनको उनिहरुलाई नेपालमा बिटी मोडालिटीमा लगानी गर्न लगाउने पछि उनिहरुले त्यो काम २ बर्ष पाँच बर्षको समयावधिमा सक्छन । अन्तिममा सरकारलाई उनिहरुले गरेको कामको विल पेश गर्न लगाएर पछि सो रकम भुक्तानी लिन सक्नेछन । त्यसमा पनि हामीले लगानी गरेको छौँ । त्यस्तै आयात–निर्यातको क्षेत्रमा पनि हाम्रो लगानी छ । जस्तो अव नेपालमा बाहिरको सामान आइरहेको छ । राज्यले राजस्वमार्फत आयात गर्दा आम्दानी गरिरहेको छ । जसमा हामीले इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा सिंगापुर,मलेसियासंग व्यापार अघि बढाइरहेको छौँ । अर्को स्वास्थ्य र शिक्षा । यसमा यो ग्रुपले नाफालाई भन्दापनि सामाजिक दायित्व अन्तर्गत हाम्रो कम्पनि र टिमलाई चिनाउन गाँउमा गएर विद्यालय बनाउने त्यसको लागि अर्को एउटा संस्थापनि हामीले निमार्ण गर्दैछौ जुन हाम्रै भगिनी संस्थाको रुपमा हुनेछ । यसको सुरुवाती जिल्ला भनेको ओखलढुङ्गा,सिन्धुली र उदयपुर हो । यी जिल्लामा यो बर्षबाट जहाँजहाँ भुकम्पले विद्यालय भत्किएको छ,त्यहाँका बच्चाहरुलाई कपि–कलम देखी लिएर स्वास्थ्य चौकी समेत स्थापना गरेर विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नेछौैँ । हेल्थ एण्ड एजुकेशन चाँही हाम्रो एनजियोको रुपमा समाजमा हामीले गरेको व्यापारको केही प्रतिशत रकम चाँही लगानी गर्छौ ।
हेल्थ एण्ड एजुकेशनमा चाँही तपाईहरुको पोलेसी कस्तो हुन्छ ? आम नेपालीलाई कसरी सेवा दिनुहुन्छ ?
– हामी हेल्थमा हाम्रो कम्पनीले जुन ग्रोथ गरेको हुन्छ, हाम्रो कम्पनीको फण्डिङ हुन्छ त्यबाट केही हिस्सा खर्च गर्छौ । त्यो चाँही हामीले निष्पक्ष ,विना स्वार्थ जहाँनेर शिक्षाको कमि छ । जस्तो शिक्षक तलव नभएर त्यहाँ जान सकेको छैन, त्यहाँ स्थानिय सरकारसंग छलफल गरेर हामीले लगानी गरेको पैसा त्यो अनुसार शिक्षामा लगाउछौ । अर्को स्वस्थ्यको कुरा गर्नुपर्दा हामीले त्यस्ता ठाँउहरुमा स्वास्थ्यचौकी खडा गर्ने हैन । त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी हुन्छन, त्यहाँ गएर स्वास्थ्यको के छ त समस्या ? औषधी छैन कि,स्वास्थ्य शिक्षाको ज्ञान छैन की त्यो बुझ्ने हो । त्यहाँ गएर हामीले विभिन्न किसिमका शिविरहरु गर्छौ, जुन काम हाम्रो छुट्टै कोष हुन्छ त्यो कोषबाट लगानी गर्छौ । जहाँ गरिव नागरिकहरुले सेवा पाउनेछ । यस्तो पवित्र काममा कुनै पुर्वाग्रह वा राजनितिक आस्थाका कारण भेदभाव हुनेछैन । नितान्त सेवाभाव लिएर हामी सामाजिक कार्यमा लाग्नेछौ ।
च्यारीटीको लागि उनिहरुले सर्टेन् एउटा विजनेस गरेको हुन्छ त्यसको लागि जस्तो अव कोलुम्बियाको सुडानको रिफ्यूजि मान्छेहरु जुन आउने हुन्छन् सहयोग गर्दिने त्यो अनुसारको चाँहीँ एउटा कम्पनीलाई हाँम्रो पोर्टफोलियो स्ट्रङ गर्नको लागि र हाम्रो नेपालकै जनताको उन्नत्तीको लगि हामीले आफ्नो कम्पनीबाट हामीले रेप्रिजेन्ट गरेर यो कार्यक्रमहरु गर्छौँ ।
– कतिपय सँस्थाहरुले चाँही एउटा सेक्टरमा काम गरी रहेको अवस्थामा तपाईहरु रेष्टुरेन्ट हस्पीटालिटी हेल्थ एन्ड एडुकेशन लगाएत अन्य क्षेत्रमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ,यसको लागि व्यवस्थापकिय र लगानीको हिसावले कसरी गरिराख्नुभएको छ ?
लगानीको हिसावले भन्नुपर्दा जस्तै मसंग एउटा टिम छ,जुन एफडिआई गरेर पैसा आउछ । उनिहरु आफै विजनेसमा पोख्त छन । नेपालमा पनि हाम्रो सर्कलमा जस्तो लाईक तपाईहरु हुनहुन्छ तपाईहरुसंग आइडिया नहोला,कतिपय मान्छेहरुसंग पैसा छ आइडिया छैन दुईभन्दा बढी क्षेत्रमा उनिहरुले विजनेसमा हात हालिरहेका छन । तरपनि केही अभाव छ भने त्यस्ता मान्छेहरुसंग आइडिया सेयर गरेर प्लान सो गरेर । जस्तो हामिलाई बैँकले पनि साथ दिएको छ । बैँकसंग पनि समन्वय गरेर,जो मान्छे इच्छुक छ, । जस्तो अव नेपाल भनेको जति पनि मान्छे छन त्यसमा ३० प्रतिशतले मात्र व्यापार,विजनेस गरेका छन ७० प्रतिशत जनता भनेको आफ्नो पुर्खौलाी सम्पतीलाई मेन्टेन गरेर जिविका चलाइरहेका छन । हो त्यस्ता मान्छेहरु जोसंग आइडिया छैन उनिहरुलाई टिममा ल्याएर उनिहरुको पनि प्रस्ताव हुन्छन, हो त्यसलाई पनि हेरेर हामी लगानी गर्छौ । हाम्रो प्रमुख लगानी भनेको बाहिरबाट आउने लगानी नै हो । बेलाएत,जर्मनीबाट हो । अहिले कोरियासंग पनि चलिरहेको छ । र नेपालको पुजनिय सम्पती भएको मान्छे स्वयम म आफै,,मेरो परिवार,मेरो साथीभाई टिम छ । कसले कति सक्छ हाम्रो एक्सपोटिजमा उनिहरुको लगानीलाई ग्रोथ गरेर लादैछौ ।
– जस्तो अरु धेरै संस्थाहरु छन, जो नाफा मुलक छन र देखावटी एनजियो छ, उनिहरु पैसा कमाउने धन्दाको लागि परेका छन तर तपाईलाई यी विभिन्न क्षेत्रलाई एकैचोटी समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ?
म विचमा बाहिर घुम्न गएको थिए । त्यो बेलापनि एउटा सोच थियो । तर मेरो आज भन्दा ६ बर्ष अगाडीको सोच थियो यो काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने । तर हिजोको दिनको बारेमा तपाईलाई थाहा नै छ नेपालको राजनितिक अवस्था, जहाँ विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु भइरहेका थिए । त्यतीबेला त्यो सम्भव थिएन । तर आज त्यो अवस्था छैन, नेपाल आजको समयमा निकै शान्त र काम गर्न लगानी गर्न योग्य देश भएको छ । म आफै इन्डियामा पढेको हुनाले मेरो त्यहाँ साथीको आफ्नै कम्पनी थियो । उनिहरुले अहिले बैङलोरमा चलाइरहेको छ । उनिहरुले एउटा टिम संगठन गरेर चलाइरहेको छ । त्यो देखेर जस्तो मलाई आई कान्ट, बट वि क्यान भनेर एउटा कन्सेप्ट आयो । मैले देशविदेश घुम्दाखेरी । बाहिरको कम्पनीहरु ऋहिले यसरी नै सफल भइरहेका छन । जस्तो बैँकपनि आजको दिनमा हरेक क्षेत्र मर्ज भएर गइरहेका छन । त्यस्तै एउटा अवस्थाको अवसरलाई मैले ग्रयव गरेको हुँ ।
– तपाई आफैपनि एक जुझारु युवा हुनुहुन्छ, टिम म्यानेज गरेर काम अघि बढाइरहनुभएको छ । अव तपाईहरुलाई सरकारको तर्फबाट कस्तो बातावरण बन्यो भने अझ आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुनेछ भन्ने लाग्छ ? कस्तो आशा गर्नुभएको छ ?
अव हामी सरकारको भन्दापनि हामी प्राइभेट सेक्टर भएको हुनाले नेपालको जो इनभेष्टर हुनुहुन्छ उहाँ हरु नभइकन जो मेरो बाहिरबाट आउने इनभेष्टर हुनुहुन्छ । उहाँहरुको चाँही के छ भने नेपालको आज हैन १० बर्षपछिको योजना र सम्भावना हेर्नुहुन्छ । भोली यो देश कुन बाटोमा जान्छ ? राजनितिक अथलपुथल कस्तो होला ? आर्थिक स्थिति कस्तो होला ? त्यो हेरेर गर्नुहुन्छ । अहिलेपनि हामीलाई के गाह्रो छ भने नेपालमा स्थिर सरकार छैन । त्यसले गर्दा हामीलाई मुख्य समस्या छ । यसमा सरकारले पनि अव सोच्न जरुरी छ । अहिले पनि तपाईले हेर्नुस इन्डियामा जानुस, चाइनामा जानुस त्यहाँको रोडदेखि लिएर हाइड्रो प्रोजेक्ट भनेको सरकारले प्राइभेट कम्पनीलाई दिइसकेको छ । प्राइभेट कम्पनीले ह्याण्डओभर गरिसकेको छ । त्यो अनुसारपनि नेपालमा नियम कानुन आएर हरेक काम गर्दाखेरी नेपाल सुरक्षित छ नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ यहाँ कुनै समस्या छैन,नेपाल सक्षम छ भनेर मिडियाहरुले पनि यस किसिमको कार्यक्रम चलाईदिनुभए हामीले बाहिरबाट ल्याउने विदेशी लगानीकर्ताहरु जो छन उनिहरुलाई अझ विश्वासको बातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेथियो । जस्तो एकवर्ष अघि मधेस आन्दोलनको समयमा मसंग केही विदेशी लगानीकर्ताहरु थिए तर उनिहरुले नेपालको मधेस आन्दोलनलाई बहना बनाउदै लगानीबाट टाढिए । हो यस्तो स्थितिको अन्त्य गरेर सरकारले पनि देश विकासको लागि चाहिने मेरुदण्ड के हो त ? यसमा आफ्नो धारणा सरकारले प्रष्ट पारेको खण्डमा हामीलाई काम गर्न सहज हुनेथियो ।
– जस्तो तपाईहरुले तिनवटा जिल्लाहरुमा आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ । निकट भविष्यमा यो योजनालाई तपाईहरुले कहाँसम्म पुर्याउने विचार गनुभएको छ ?
यो योजनालाई हामी अल ओभर नेपाल जहाँ हरेक किसिमले विकट छ, हाम्रो टिम त्यहाँ गएर सर्भे गरिसकेको छ । त्यहाँ त्यो सेवा पुर्याउने विचारमा छौँ । हामीले सर्भेपनि गरिसकेका छौँ । जहाँ विकट र एकदमै अभाव छ । यो सेवा कुनै सुगम र बजार एरियामा हैन । राजधानीको छिमेकी जिल्लादेखी लिएर जहाँ अभाव छ एकदमै विकट छ । जस्तो त्यहाँका मान्छेहरु पढ्न चाहन्छन, शिक्षकको तलव १२,१३ हजार छ ,उ त्यहाँ बस्न पर्यो ,खान पर्यो । उसकको सेवासुविधाको लागिपनि हामी व्यवस्था गर्छौ । त्यसो हुँदा उसले त्यहाँ बसेर पढाउने भयो । आज उसले कुनै पावर लगाएर सुगम र सुविधाले भरिएको ठाँउमा जान नखोजेर गाँउमै विकट क्षेत्रको सेवा गर्छु भनेर बस्न खोज्यो भने उनिहरुलाई मनोवल बढाउन शिक्षक लगाएत विद्यार्थीलाई समेत सहयोग गर्छौ । अहिलेपनि जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित छन त्यहाँ हामी लगानी गर्छौ ।
– यो टिमलाई विश्वास गर्न लायक आधारहरु के के हुन ?
आधारको विषयमा भन्नुपर्दा मेरो टिम ,हाम्रो प्लान । हाम्रो एक्सपोटिज, टेक्निकल टिम, मेरो डिजाइनिङ टिम नै हो । आज म तपाईलाई कुनै कागज ग्यारेन्टि दिन्छु ,त्यो ग्यारेन्टिले मात्र काम राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । अहिलेको युगमा । हिजोको युगमा एउटा ल्याप्चे हानेर त्यसलाई विश्वास मानिन्थ्यो भने आजको दिनमा मान्छेहरु यति सक्षम भइसकेका छन भने त्यो भन्दापनि उनिहरुले प्लानमा विश्वास गर्ने हुन । मान्छेलाई अध्ययन गर्न जुन हामीले प्लान गर्छौ त्यो प्लान भनेको अरुभन्दा एक्स्ट्र अडिनरी संगै ग्यारेन्टिमा हामीले पोलेसी बनाएर बेच्ने हो । हामीले चाँही तपाई आउनुस लगानी गर्नुस,तपाईलाई ग्यारेन्टि दिन्छौ तपाईलाई कागज दिन्छौ भनेर होइन । हाम्रो प्लान यो हो । यो प्लान तपाईलाई स्विकार्य छ कि छैन ? तपाई बजारको अध्ययन गर्नुहोस अनिमात्र तपाईलाई ठिक लाग्छ भने त्यसमा आएर लगानी गर्नुस । यसमा चाँही हामी नयाँ प्लान बेच्ने हो । हाम्रो लागि विश्वास गर्ने आधार हाम्रो प्लान र पोलेसीको हुनेछ ।
– तपाईको संस्था नै लगानीलाई जोड दिने संस्था हो । अहिले तपाईहरुसंग लगानी गर्नको लागि कति हारहारीमा कोष तयार छ ?
हामीसंग अहिले मार्केटमा करिव १० करोडको लगानी भइसकेको छ । अव केही महिनामै जर्मन र बेलायतबाट लगानीकर्ताहरु आउदैहुनुहुन्छ । आज करोडमा छ मेरो कम्पनी भोली अरवमा जाँदैछ । अव छिट्टै नै थ्री स्टारको रिर्सोटको ओपनिङ हुने अवस्थामा छ त्यहाँ हाम्रो कम्पनीको लगानी १० करोडको हुनेछ । त्यस्तै हाइड्रोमा पनि हाम्रो लगानी हुनेछ । त्यसमा तिन अर्वको स्टमेट गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो कम्पनीको लगानी १० करोडको छ अवको केही महिनाभित्र ४ अर्वको पुग्ने छ र केहिबर्ष भित्र १० अर्व पुग्नेछ । अहिले यो कम्पनीले नेपालमा मात्रै लगानी गरेको छ अवको केही बर्षभित्र एउटा सक्सेसफुल मल्टीनेशनल विजनेस कम्पनीको रुपमा जानेछ ।
– सरकारसंग समन्वय गरेर जाने सवालमा तपाईहरु लाई सरकारी निकायसंग कुनै किसिमको प्रशासनिक झमेला परेको छ कि छैन ?
यो कुरा तपाईलाई आफैलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो । नेपालमा जो गलत गरिरहेका छन उनिहरुलाई धेरै सजिलो छ जसले राम्रो गरिरहेका छन उनिहरुलाई धेरै तरिकाबाट मार खुवाउने काम गरिएको छ । आज म मेरो कम्पनीबाट कुनै सरकारी निकायमा जाँदा अहिले सम्म त्यस्तो कुनै समस्या भोगेको छैन तर काम गर्दैजाँदा कहिलेकाँही मेरोबाट समस्या हुन्छ की उहाँहरुबाट हुन्छ । नेपाल भनेको गर्नेलाई केही गाह्रो छैन नगर्नेलाई अलि गाह्रो हो । मेरा यो पहिलो अनुभव हैन तस्रो अनुभव हो । अहिले सम्म त्यती गाह्रो परेको छैन । मुलुकमा स्थायी सरकार नभएरमात्र कर्मचारीतन्त्रमा केही समस्या देखिएको मात्र हो नत्र अरु सवै ठिकै छ ।
– विदेशिएका नेपालीलाई रोक्न तपाईको कम्पनी वा व्यक्तिगत तर्फबाट के कस्तो पहल हुन्छ ?
यसमा भनेको मेरो जुन कम्पनी छ सि एन एस कम्पनी । त्यहाँ बाट गरिएको लगानीबाट करिव १००० जना नेपालीले रोजगारी पाउनेछन । अझ मैले जुन रोजगारको लागि चाहेको हुन्छु ती मान्छेहरु आज नेपालमा छैनन् । उनिहरु विदेशमा काम गरिरहेका छन । हो उनिहरुलाई नेपाललाई ल्याउन मेरो पहल रहनेछ । अर्को कुरा भनेको सरकारले विभिन्न उद्योगपति ,व्यवसायी र बुद्धीजिवीहरुलाई एकैठाँउमा राखेर देशको बेरोजगार कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर सोही बमोजिमको ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गरेर विभिन्न किसिमका रोजगारीप्रेरित कार्यक्रम गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसको प्रमुख भुमिका भनेको प्राइभेट सेक्टर भन्दापनि सरकारी निकायबाट पहल हुन जरुरी छ । यसको समन्वय गर्न म जहिलेपनि तयार छु । मेरो केहि समय अघि म चाइना गएको थिए । त्यहाँ एउटा स्कुलमा कुन विद्यार्थी कस्तो भन्ने मुल्याङकन गरिने रहेछ र राम्रा विद्यार्थीहरुको सेलेक्सन गरिदो रहेछ । हो नेपालमा पनि बर्षैपिच्छे एस एल सी,प्लस टु,ब्याचलर लगाएत अन्य तहबाट उत्कृष्ट व्यक्तिहरु निस्किन्छन त्यसको सरकारले आँकडा राख्न पर्यो र राज्यले त्यस्ता व्यक्तिहरुको बृती विकास गरेर राज्य निर्माणको लागि प्रयोग गर्नपर्यो । यो गर्न सकियो भने नेपालमा त्यही किसिमको निति बन्छन त्यही अनुसारको विकास हुन्छ र बेरोजगारीको अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रस्तुती : राज ढुंगाना
Previousविश्वकै सबैभन्दा लामो सुरुङ रेलमार्ग आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला [फोटो फिचर]
Next‘मलाई नेपालमा स्वतन्त्र यूवा छन भन्न लाज लाग्छ’
हेटौंडामा संगीत र सुदीपले सुनाए दुई दर्जन कविता
११ चैत्र २०७४, आईतवार १४:५०
गायीका पन्तले सम्झिईन् आफ्नो पदेशिएको मायालुलाई [भिडियो सहित]
३ माघ २०७३, सोमबार १३:४०
यि हुन् कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ सांसद सिफारिस भएकाहरु (सुचीसहित)
२९ माघ २०७४, सोमबार १८:१६
क्रिकेट : हङकङविरुद्ध नेपाली टोलीको घोषणा, को को परे ? को को बाहिरिए ?
२२ भाद्र २०७४, बिहीबार ०८:०८